Uzoveza ikhono kwiThe River
UMNQOBI Yazo ungomunye wabalingisi abasha abazobonakala kwiThe River, lapho ezolingisa indawo kaSteven oyinkabi. Isithombe: TWITTER
INSIZWA yaKwaMaphumulo ezakhele igama endimeni yomculo uMnqobi Yazo, izogqamisa ithalente layo komunye wemidlalo ehamba phambili kuleli, iThe River.
UMnqobi ungomunye wabalingisi abasha abazobonakala kulo mdlalo emasontweni amabili azayo.
Isolezwe izolo libike ngokuthi uSeputla Segobodi ungomunye wabalingisi abasha abazojoyina lo mdlalo.
Kulo mdlalo uMnqobi uzosebenza eduzane noSeputla, elingisa indawo kaSteven oyinkabi.
Ekhuluma neSolezwe uMnqobi, uthe okumjabulise kakhulu ukusebenza nabantu abanjengoSindi Dlathu noSeputla.
“Ngiyathemba kuningi engizokufunda kubona. Umdlalo wami wesibili lo kwithelevishini, manje ngisemdlalweni i-Erased kwMoja Love. Ukulingisa ngakufundela eCreative Arts eThekwini, ngemuva kwalokho ngase ngilingisa emidlalweni ehlukene yeshashalazi. Umculo nawo wase ufika kodwa kwakungeyona into engangifuna ukugqama ngayo, ukulingisa yikhona engangikufuna kakhulu,” kusho uMnqobi.
Uthe ababukeli bazomthanda uSteven, ngoba yize eyinkabi kepha unozwelo.
“IsiZulu sami yisona abasithande kakhulu kulo mdlalo. Ngiyathemba amanye amathuba afana nalawa azoqhubeka nokuvela ngoba iphupho lami likuwona lo mkhakha,” kuchaza uMnqobi.
Ngokwesitatimende esithunyelelwe abezindaba, uSteven uhlala eRefilwe futhi wayengumsebenzi wasemayini iKhanyisa Diamonds, kodwa wayeka ngenxa yokuthi wayengayithandi indlela abaphathi ababemphethe ngayo ikakhulukazi uZolani.
“USteven waba nomona ngoZolani njengoba ebona sengathi akawazi umsebenzi othinta imayini, futhi akakufanele nokuba imenenja. Uma esebuya emayini ngemuva kokuhamba iminyaka, ufica umsebenzi ungasekho, lokhu kumenza abe nenhliziyo embi ahlangane nabantu okukhona kubo uMohumi, omnika imiyalelo ngezinto afuna zenzeke empilweni kaLindiwe noZolani,” kuchaza lesi sitatimende.
Omunye ojoyina lo mdlalo uSegomotso Modise, ozolingisa indawo kaMad Dog.
Naye wayesebenza eKhanyisa Diamonds kodwa manje ungunogada emtholampilo.
Ungomunye wabantu abafuna ukuziphindiselela kubantu abamhlukumeza esasebenza emayini, okwenza abe ngomunye wezinkabi zikaMohumi.